Gali dugsiga, shirkadda, ama magaca shabakadda
Isbarbar dhig 0
Ku noqo baadiye
Ku saabsan [[nooca]]
Aqoonta Luqadda ee Barteyaasha Ingiriisiga
Diyaarsanaanta Kuliyada iyo Xirfadda
Sidee loo qiimeeyay heerka gobolka ee dugsigaan?
Dugsi kastaa wuxuu helaa dhibco dhammaan tilmaamayaasha lagu dabaqi karo. Dhibcaha tilmaamayaashan waxaa culeyskoodu yahay in la soo saaro darajada ugu dambeysa ee xarafka 'AF', oo ku saleysan cabirka dhibcaha 0-100. (Isha xogta: Sanad dugsiyeedka 2018-2019) Waxbadan ka baro
Fasalka waqti ka dib
Tilmaamahan ayaa cabiraya heerka ardayga ee heerarka heerka fasalka ee Ingiriisiga / Luuqada Arts iyo Xisaabta dugsiga.
Tilmaamahan ayaa cabiraya koritaanka ardayga xagga aqoonta iskuulka. Arday kasta wuxuu kasbadaa dhibco ku saleysan nooca koritaanka la muujiyay (koritaan hoose, koritaan caadi ah, koritaan sareeya). Qodobbada waxaa loo xilsaaray iyadoo loo adeegsanayo koritaanka miiska aqoonta. Dugsiyadu waxay ka dhaafi karaan 100 dhibcood cabirkan.
Qalin jabinta iyo Kuliyada iyo Diyaarsanaanta Shaqada
Tilmaamahan ayaa cabiraya dhammaystirka ardayga ee shuruudaha qalin-jabinta Indiana afar sano iyo shan sano dugsiga, iyo caddeynta ardayga ee muujinaya u diyaarsanaanta heerka dugsiga sare.
Waaxda Waxbarashada Indiana
Kheyraadka dheeraadka ah
Raadi Xogta Iskuulka iyo Shirkadaha